लकडाउन उलङ्घन भइरहे बल प्रयोग गरिन्छ : प्रवक्ता प्रदेश १ सरकार
प्रदेश १ का पाँच जिल्ला भारतसँग सिमाना जोडिएका छन्। भारतका सिमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल र बिहारमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण मानिसहरुको ज्यान गइरहेको छ। संक्रमितहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। ती राज्यसँग खुल्ला सीमा रहेको प्रदेश १ मा दुवै देशमा लकाउन भए पनि मानिसहरु नेपाल प्रवेश गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले समेत लुकीछिपी नेपाल भित्रिनेलाई रोक्न गाह्रो भएको बताइरहेका छन्। नेपालमै पनि केहीले लकडाउन उल्लंघन गरिरहेको देखिन्छ।
यसैबीच, प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सिमानामा कडाइ, लकडाउन र क्वारेन्टाइनको अवस्थाका विषयमा सुमन पुरीले कुराकानी गरेका छन्।
प्रदेश १ का पाँच जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या र मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा प्रदेश १ सरकारले सिमानामा के गरिरहेको छ?
पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी भारतसँग जोडिएका छन्। खुल्ला सीमा छ। ती जिल्लालाई मात्रै हेर्ने हो भने १ सय ५१ वटा नाकाबाट मानिसहरुको आवतजावत हुन्छ।
मान्छे मात्रै आवतजावत गर्न त ठूला भन्सार, छोटी भन्सार र विगतमा मानिसहरुको आवातजावत गर्ने बाटो बाहेक पनि अन्य बाटो छन्। पहिला प्रदेश १ भरिमा भारतसँग सीमा जोडिएको स्थानमा जम्मा ३२ बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) थियो। अहिले सशस्त्र प्रहरीको थप जनशक्ति बढाएर १ सय ५१ वटा नै स्थानमा बीओपी स्थापना गरिएको छ। बीओपीहरुमा १० देखि १५ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
त्यहाँ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यतिले मात्रै सीमा सुरक्षित हुन सक्दैन। तारबार छैन। सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदाहुँदै पनि खोलाको पानी सुकेको अवस्था छ र त्यहाँबाट पनि मानिसहरुको आवतजावत हुन सक्छ। भारतसँग जोडिएका पूर्व नाकाबाट भने नेपालीहरु आउने क्रम शतप्रतिशत रोकिएको छैन। चेकपोष्टबाहेक पनि खुल्ला सिमाना रहेका कारण मानिसहरु नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले यस विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ।
सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने विषयमा संघीय सरकारले भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरेको छ। त्यताबाट नेपाल आउनेलाई उतै क्वारेन्टाइनमा राखिने र यताबाट भारत जान खोज्नेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै पठाउने सहमति भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले समकक्षीहरुसँग अहिले पनि कुराकानी गरेर आवतजावत रोक्ने बिषयमा सहकार्य गरिरहनु भएको छ। तर अहिलेसम्म पनि सोचेको जस्तो काम हुन सकेको छैन।
दुई दिनअघि मात्र इलामको पशुपतिनगरमा ९० जना दोलखाका नेपाली नागरिक भारतबाट काम गरेर फर्किएका छन्। उनीहरु लकडाउनका बेला सीमा नाकामा आएर अलपत्र परेपछि केही दिन भारततर्फ राखियो र हिजोबाट नेपालतर्फ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। शतप्रतिशत नतिजा आउन सकेको छैन। तर शतप्रतिशतको लागि सुरक्षाकर्मीहरुले काम गरिरहेका छन्। यो बेला उहाँहरुको कामबाट म प्रभावित छु। उहाँहरुले उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहनु भएको छ।
तर सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले बीओपीमा त्रिपालसमेत नपाएको गुनासो आइरहेको छ? खाने बस्नेसम्मको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सरकार के गरिरहेको छ?
हो, यहाँले भनेको सही नै हो। हामी अहिले पनि बीओपीलाई व्यवस्थित नै गरिरहेका छौ। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि भनेर हामीले नजिकका स्कुलहरुमा बस्ने प्रबन्ध मिलाइरहेका छौं।
कतिपय स्थानमा पुराना भवनहरुलाई पनि प्रयोग गरेका छौं। मन्त्रालयबाट सचिवस्तरीय भ्रमण भएपछि दयनीय अवस्थामा टेन्टहरु थपेका छौं। ५ देखि ६ किलोमिटरसम्मको दूरीमा बीओपी भएकाले बीचमा गस्ती गर्नका लागि सहज होस भनेर गाडीहरुको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।
अरु मन्त्रालयका गाडीहरु तानेर पनि अहिले ती पोष्टहरुमा पठाइँदै छ। न्यूनतम चाहिने कुरा हामी पुरा गरिरहेका छौ। सुरक्षा निकायको सन्दर्भमा तपाईंहरुले देख्नु भएको छ नि ! यो बेला उहाँहरुले आफ्नो सम्पूर्ण ‘इफोर्ट’ सीमा सिल गर्न लगाउनु भएको छ। उहाँहरुको बसोबास र व्यवस्थापनमा पालिकाहरुसँग पनि सहकार्य भइरहेको छ।
सीमामा कडाइ गरिए पनि नेपाली आउने क्रम जारी छ। भारतमा अझै अवस्था गम्भीर भए त्यहाँका नेपालीहरु नेपाल आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ।
भारतबाट आउनसक्ने सम्भावित नेपालीहरुको अवस्थालाई मध्यनजर गरी इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा उनीहरुका लागि विश्रामस्थल र क्वारेन्टाइन निर्माणको काम भइरहेको छ। भोलिको दिनमा आउन सक्ने जोखिमको बारेमा हामीले पूर्व तयारीलाई तीव्र बनाएका छौँ।’
पश्चिमका सिमानामा अहिले पनि थुप्रै नेपालीहरु नेपाल प्रवेश गर्ने पर्खाइमा छन्। प्रदेश १ सीमामा पनि केही नेपालीहरु नेपाल प्रवेश पाउने आशामा भारतीय सीमामा रहेको सूचना आएका छन्। प्रदेश सरकार यसबारेमा कत्तिकाे जानकार छ?
नेपालबाट भारत जाने चाहनेको संख्या अहिले सिमानामा ४ सयको हाराहारीमा छ। उहाँहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उताबाट नेपाल आउने चाहना र सिमानामा रोकिएको संख्या प्रदेशभरिमा ५ हजारको हाराहारीमा रहेका छन्। तीमध्ये पश्चिम बंगाल साइडमा धेरै रहेको सूचना छ। उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ।
अहिले लकडाउनको अवस्था छ। तर पनि मानिसहरु लकडाउन उल्लंघन गरिरहेका छन्। लकडाउन खकुलो बनाइएर यस्तो भएको हो कि सरकारलाई नटेरेर मानिसहरु सडकमा आएका हुन्?
सबैभन्दा पहिलो कुरा जनताले आफ्नाे स्वास्थ्यको कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो। आफैं सचेत हुनुपर्ने हो। पछिल्ला दिनमा सुरक्षा सचेतना अपनाउन भनेपछि सुधार आएको हो। तर अहिले पनि तराईका बजारहरुमा आवतजावत र ओहोरदोहोरमा अनुशासन पालना भएको छैन। हामीलाई अनुशासन पालना गराउन प्रेसर पनि भएको छ। त्यसैले हामीले सुरक्षा समितिको बैठक बसेर लकडाउनलाई कडाइ गरेका छौं। यति हुँदा पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
हामीले स्थानीय तहलाई पनि भनेका छौ। स्थानीय तहले केही कुरामा ध्यान दिए लकडाउन व्यवस्थित हुन्छ। अहिले राहत वितरणको नाममा भइरहेको लापरबाही वा कमी कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहका वडाहरुले सबैको सहयोगमा घर घरमा राहत वितरण गर्नुपर्छ। किन भने वडालाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। को मान्छेलाई कति दिन खान पुग्छ भन्ने थाहा हुन्छ। को मान्छेले राहत पाउने हो कसले पाउने होइन? वडाले राजनीतिक पार्टी र सामाजिक संघसस्थाको सहयोगमा राहत घरमा पुर्याइदिए यो समस्या रहँदैन। दोस्रो कुरा हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले स्थानीय तहहरुलाई भनिसकेका छौं। यसबारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भनेका छौं। मलाई लाग्छ, हाटबजार र किनमेललाई व्यवस्थित गर्नु हुनेछ। यदि गर्नु भएन भने प्रदेश सरकार बल प्रयोग गर्छ। यो अवस्था नआओस्।
अर्को कुरा हामीले खाद्यान्न र औषधि आपूर्तिमा छुट दिएका छौं। जस्तो, औषधि उपचार र खाद्यान्न आपूर्तिका लागि यो कुरालाई मानिस स्वयंले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसमा हामीले बल प्रयोग गरेर रोक्न सक्दैनौं। त्यसैले उपभोक्ता स्वयंले लकडाउन आप्mनै लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ।
तपाईंको नेतृत्वमा रहेको समितिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र क्वारेन्टाइन निर्माणको जिम्मा पनि पाएको छ। तर प्रदेशमा बनेका क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार नबनेको गुनासो आइरहेको छ। पालिकाहरुका बीचमा क्वारेन्टाइन बनाउने होड छ। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड र अनुगमनको काम कसरी भइरहेको छ?
यो प्रदेशमा अहिले तीन प्रकारका क्वारेन्टाइन बनेका छन्। एउटा, स्थानीय तहले आप्mनो आवश्यकताका लागि भनेर क्वारेन्टाइन बनाएका छन्। हरेकले क्वारेन्टाइन बनाएका छन्, स्कुललाई, सार्वजनिक भवनलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। दोस्रो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला सदरमुकाममा क्वारेन्टाइन बनाएको छ। तेस्रो प्रदेश सरकार आफैंले नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा क्वारेन्टाइन बनाएका छौं।
अहिलेसम्मको अनुगमन अनुसार नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनहरु मापदण्ड अनुसारका छन् भन्ने आएको छ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बनाएका केही क्वारेन्टाइन दोस्रो ग्रेडमा छन्। स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइन केही राम्रो र केहि नराम्रो रहेको आएको छ। अहिले हामीले स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन बनाउन बल नगर्नु भनेका छौं। प्रदेश सरकारले यसको जिम्मा लिन सक्छ। त्यसैले हामी अहिले स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनहरुको जिम्मा लिदैंछौ। इटहरी उपमहानगरले बनाएको क्वारेन्टाइन हामीले जिम्मा लिएर सञ्चालनका लागि नेपाली सेनालाई दिइसकेका छौं।
अब सीमा क्षेत्रमा बनेका क्वारेन्टाइनको जाँचबुझ गरिरहेका छौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ। जाँचबुझपछि उपयुक्त रहेकाहरुलाई प्रदेश सरकारले लिँदै आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ। जहाँ आवश्यकता छैन त्यसलाई बन्द गर्ने र त्यहाँ भएका साधनस्रोत अन्यत्र प्रयोग गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छौं।
तरहराका २ जनामा कोरोना संक्रमण .....
इटहरीमा जनता क्याम्पसका प्रध्यापकले मध्यरातमा प्रध्यापिका संग यौनको कुरा गरे पछि...